‘हिरो त म 'बाइ-मिस्टेक' भएको हो, मेरो प्रोजेक्टको हिरो चाहिँ स्क्रिप्ट हो’
नेपाल लाइभ बुधबार, भदौ ११, २०७६, १९:३८
फिल्मी क्षेत्रमा दीपकराज गिरीका अनेक परिचय छन्। आफै फिल्म बनाउँछन्, त्यसैले पहिलो परिचय निर्माता हुन्। आफ्नो फिल्मको पटकथा आफै लेख्छन्, त्यसैले लेखक हुन्। आफ्नो पटकथामाथि बनेको फिल्ममा आफै प्रमुख भूमिकामा अभिनय गर्छन्, त्यसैले अभिनेता पनि हुन्।
अहिले फिल्म क्षेत्रमा दीपक र उनको फिल्म निर्माण समुूह एउटा यस्तो अपवाद देखिएको छ, जसको फिल्मले लगातार बक्सअफिसमा जादु गरिरहेको छ। उनीहरूको फिल्म ‘६क्कापन्जा’ले १६ करोडको व्यापार गरेर इतिहास कायम गरेको छ। यसका सिरिज लगातार हिट भएपछि अहिले फिल्मवृत्तमा यो समूहको ‘मार्केट भ्यालु’ पनि बढेको छ।
गत सोमबार पटकथा लेखन कार्यशालाको छैठौं दिन सहभागीसँग आफ्ना अनुभव बाँढ्न मकवानपुरको चित्लाङ आइपुगेको थियो, ‘६क्कापन्जा’ टोली। टोलीमा थिए, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’।
दीपकलाई सोधियो- ‘आफ्नो फिल्मको स्क्रिप्ट आफै लेख्नुको मुख्य कारण के हो?’
जवाफमा उनले भने, ‘सुन्दा नरमाइलो लाग्ला तर मलाई कसैसँग पनि विश्वास छैन, त्यसैले। मैले भन्न खोजेको कुरालाई म जसरी अरुले पूर्णतः समय दिएर पूरा समर्पणका साथ काम गरिदिएला भन्नेमा विश्वास लाग्दैन। किनभने हाम्रो इन्डस्ट्रीको मुख्य समस्या नै स्क्रिप्ट राइटर हो।’
‘कतै आफ्नो क्यारेक्टर ओझेलमा पर्ने डरले त होइन?’ प्रतिप्रश्न तेर्सियो।
जवाफमा उनले यो आरोप स्वीकारेनन्। भने, ‘फिल्ममा मैले मेन रोल गरेपनि सहायक पात्रहरूको अभिनयले नै दर्शकको मन जितिरहेको हुन्छ। जस्तो कि, ‘६क्कापन्जा’ सिरिजमा माग्ने बुढा दर्शकका लागि 'अल टाइम फेभरेट' हो। यति भन्दाभन्दै म के भन्न पनि छोड्दिनँ भने फिल्ममा मेरो रोल कमजोर छ, मेरो क्यारेक्टरको उपस्थिति बलियो छैन भने म त्यो फिल्म तुरुन्तै रिजेक्ट गरिहाल्छु। मलाई फिल्ममा मेरो क्यारेक्टर हुनुको अर्थ त चाहिन्छ, चाहिन्छ।’
फिल्म क्षेत्रमा दीपक-दीपाको फिल्मले सिनेमा हलबाट राम्रो पैसा उठाए पनि समीक्षकको नजरमा कहिल्यै राम्रो समीक्षा पाउन सकेको छैन। उनीहरूको फिल्ममाथि कलाभन्दा बढी पैसालाई महत्व दिने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
सँगसँगै दीपकमाथि अर्को आरोप पनि छ, आलोचना सुन्न नरुचाउने र तत्काल 'रि-एक्ट' गरिहाल्ने। तर, अचेल दीपक यो मामिलामा सचेत देखिन्छन्। स्क्रिप्ट सिक्ने सहभागी प्रशिक्षार्थीका अगाडि उनी भनिरहेका थिए, ‘हो, मलाई यसले आर्टलाई कम महत्व दिन्छ, पैसा कमाउने ध्याउन्नले मात्रै फिल्म बनाउँछ भनेर आलोचना गर्ने वर्ग पनि छ। तर, म उनीहरुको टिप्पणीको पनि सम्मान गर्छु किनभने उनीहरुको त्यस्तो आलोचनाले मलाई कतै न कतै सुधार्ने मौका दिएकै छ, गम्भीर बनाउँदै लगिरहेकै छ।’
पालो आयो, दर्शकदीर्घा अघिल्तिर स्टेजमा दीपकको छेउमै बसेका हास्य अभिनेता केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढो’को। कार्यशाला स्क्रिप्ट केन्द्रित थियो।
त्यसैले उनले सुरुमै भने, ‘हामीकहाँ धेरैले भन्ने गर्छन्, ‘ह्या, कसले हेर्छ यो नेपाली चलचित्र, पैसाको सत्यनास।’
नेपालीको मुखबाट यस्ता वाक्य फुत्किनुको मुख्यको कारण उनका लागि स्क्रिप्ट नै हो। भन्दै थिए, ‘यो स्क्रिप्टकै अनिकालको परिणाम हो। फिल्मको मेरुदन्ड नै बलियो नभएपछि फिल्म कसरी राम्रो हुन्छ? फिल्म राम्रो नभएपछि नेपाली फिल्मप्रति वितृष्णा जाग्नु स्वभाविक हो। त्यसपछि विदेशी फिल्मको प्रभाव बढ्नु पनि स्वाभाविक हो।’
त्यसपछि उनलाई सोधियो अर्को प्रश्न- ‘दीपकराज फिल्मको हिरो हुँदा कहिलेकाँही म पनि हुनसक्छु भन्ने लागेन?’
प्रश्न सुनेर उनी थोरै मुस्कुराए। अनि, सानो स्वर पार्दै बोले, ‘अँ, कहिलेकाँही सपना म पनि देख्छु। त्यतिबेला म ‘हिरो भा’को’ हुन्छु, अनि दीपक दाई चाहिँ फुच्चे।’
खासगरी केदार, दीपक, जितु नेपालहरु कुनै बेला प्रतिष्पर्धी थिए। सबैका आ–आफ्नै हास्य टेलिसिरियल नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुन्थे। केदारको ‘मेरी बास्सै’, दीपकको ‘तितोसत्य’ र जितुको ‘जिरे खुर्सानी’।
‘दीपक दाईले हामी सबै मिलेर अघि बढ्दा केही राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव राखेपछि हामी सहकार्य गरेर अघि बढेका हौं,’ केदारले सुनाए।
अबमात्रै उनी आफू हिरो हुन नसक्नुको कारण बताउन थाले। ‘हामीमध्ये अलिकति ह्यान्डसम उहाँ नै देखिनुहुन्छ क्या!,’ दीपकतिर औँल्याउँदै उनले ठट्यौली शैलीमा भने, ‘त्यसैले कहिलेकाँही हामी उहाँलाई जिस्काउने पनि गर्छौं। तपाईं हिरो भएको हामीलाई राखेर हो। छेउमा जितु दाई र म उभिदिन्छौं। अनि दाई अग्लो, अलि ज्यान परेको देखिनुहुन्छ, त्यसैले हिरो। अनमोल केसीलाई राखेको भए त पक्कै ठूलो बाजस्तो देखिनुहुन्थ्यो।’
छेउमा रहेका दीपक-केदारको गफ सुनेर मस्त हाँसे। प्रश्न पनि उनीतिरै सोझियो, ‘तपाईं हिरो या कमेडियन मात्रै?’
समयअनुसार हिरोको परिभाषा बदलिँदैछ। हिजो सिनेमाको हिरो बन्न मिलेको जिउँडाल र चकलेटी अनुहार खोज्नेहरुले आज दयाहाङ राई, दीपकराज गिरीहरुलाई हिरो स्वीकार्न थालिसके।
‘हिरोमाथि मेरो आफ्नै परिभाषा छ,’ दीपक भन्दै थिए, ‘मेरो प्रोजेक्टको हिरो मेरो स्क्रिप्ट हो। र, मलाई के विश्वास छ भने त्यो स्क्रिप्टमा दीपकराज गिरी नखेलेपनि त्यो फिल्म हिट हुन्छ। म त्यस्तो भयंकर एक्टर होइन। तर, म कामचलाउ एक्टरलाई पनि ‘यो केही हो कि क्या हो’ बनाको चाहिँ स्क्रिप्टले नै हो। मलाई के लाग्छ भने स्क्रिप्ट नै झुर छ भने त्यो फिल्मलाई अमिताभ बच्चनले पनि पार लाउन सक्दैन।’
उनी फिल्ममा आफ्नै कथ्य शैली हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए। हलिउडको कथा संरचनालाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने कतिपयको अनुरोधलाई उनी नमान्ने बताइरहेका थिए। ‘म मेरो कथा मेरो आफ्नै शैलीमा भन्न रुचाउँछु,’ उनी भनिरहेका थिए, ‘पब्लिक मेरै शैली रुचाइराछ, मेरै शैलीलाई पाँच पटक हेरिराछ भने म किन अरुको पछ्याउनु?’
बजारमा उनको फिल्मलाई ‘हावा’ भन्नेहरूप्रति भने उनको ठूलो आक्रोश देखियो। ‘मैले ६ वटा फिल्म बनाएर ब्याक टु ब्याक हिट भइरहेको छ तैपनि यहाँ हावामा हिट भइरहेका छ भन्छन्,’ उनी आक्रोशित भावमा गुनासो गर्दै थिए, ‘६–६ पल्ट पनि फिल्म हावामा हिट हुन्छ? ए, बाबा कम्तीमा दर्शकले स्वीकार गरेको कुरा त मान्दिनुस् न।’
‘ल यो सब कुरा त ठिकै छ, अब भन्दिनुस्, तपाई हिरोचाँही ‘हो कि होइन?’’
‘हिरो त म बाइ-मिस्टेक भएको हो,’ जवाफमा उनले भने, ‘स्क्रिप्टले बनाएको हिरो हो म। त्यसैले मुस्किलले यो बुढेसकालमा जिउ घटाइराछु। पहिले स्वादले खान पाइन्थ्यो, अहिले धेरै बारेर खानुपर्छ। साँच्चै फिल्मको हिरो बन्न गाह्रो छ।’
दीपक र केदारसँगै स्टेजमा थिइन्, ‘६क्कापन्जा’ सिरिजकी निर्देशक दीपाश्री निरौला। ‘६क्कापन्जा’ सिरिजपछि समीक्षक र केही महिला लेखकहरूले उनको फिल्ममाथि लगाएको आरोप थियो, ‘महिलाले नै बनाएको महिलामाथि मजाक उडाइएको फिल्म।’
यही प्रश्न उनीमाथि यो बहसमा पनि तेर्सियो। ‘त्यो त सब भन्ने कुरा न हुन्,’ उनले मुस्कुराउँदै जवाफ फर्काइन्, ‘एक त म 'जेन्डरवाइज' फिल्म बनाउने कुरामा विश्वास नै गर्दिनँ। अर्को के समाजमा महिला पात्र गलत छँदैछैनन् र? छन् भने किन लुकाउने? त्यसैले म महिलाको कमजोरी ढाकछोप गरेरमात्रै कहिल्यै फिल्म बनाउँदिन। यति भन्दाभन्दै म के दाबी गर्छु भने मैले अहिलेसम्म बनाएका सबै फिल्ममा महिला पात्र नै हिरो छन्।’